Ku rakibidda Redmine 2.4.0 Debian 7 | Laga soo bilaabo Linux
Ku rakibidda Redmine 2.4.0 Debian 7
Fenriz | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Redmine waa aalad maareynta mashruuca oo ay kujirto nidaam dabagal dhacdo ah oo lala socdo daba-galka cayayaanka. Qalabyada kale ee lagu daray waa jadwalka waxqabadka, jaantusyada Gantt ee matalaadda muuqaalka ee waqtiga mashruuca, wiki, golaha, daawadayaasha keydinta xakamaynta nooca, RSS, xakamaynta socodka shaqada ku-saleysan, is-dhexgalka e-maylka, iwm.
Qaybinta: Debian 7
Redmine 2.4 rakibidda. (ugu dambayn ilaa taariikhdan)
Xirmada Redmine 2.4 waa la soo dejiyey
tar xvzf redmine-2.4.0.tar.gz
Hadda waan dhaqaaqeynaa
Halkaas ayaa laga furaa dukumiintiyada rasmiga ah ee xirmada keento. (RTFM !!!)
Natiijada bisadu waxay ku socotaa jihada - » http://pastebin.com/ecUB93Hk
Nooca Ruby sidoo kale waa la hubiyaa. Kiiskan:
aptitude show ruby:
Xirmooyinka Ikhtiyaariga ah.
aptitude install ruby libmagickcore-dev libmagickwand-dev
Gem bundler ayaa la rakibay, taas oo naga caawin doonta inaan rakibno alaabooyinka ku tiirsan mashruuca.
redmine-2.4.0# gem install bundler -V
Waa inaan ku sameysano xog ururin gudaha UTF-8, xaaladdan postgresql v9.1 waxaa loo isticmaalaa magaca: "redmine".
Kadib dhammaan jawharaddii lagama maarmaanka u ahaa waa la rakibay, iyaga waa inay ku jiraan galka redmine:
Waxaa laga yaabaa inay dhibaato dhacdo markii lagu rakibayo jawiga nokogiri ee tan ay u qabtaan:
sudo aptitude rakibi ruby1.8-dev ruby1.8 ri1.8 rdoc1.8 irb1.8 libreadline-ruby1.8 libruby1.8 libopenssl-ruby ruby1.9.1-dev gem rakib nokogiri
Waxaa laga yaabaa inay dhibaato dhacdo intaad rakibayso jawharada mysql2. tan waxay u sameeyaan:
Waxaa laga yaabaa inay dhibaato dhacdo markii lagu rakibayo jawharad pg. tan waxay u sameeyaan:
Xaaladdan oo kale dhibaato kale kuma jirin rakibidda jawharad kasta.
Dukaan qarsoodi ah ayaa la soo saaray.
Waxaan abuuraynaa qaab dhismeedka keydka macluumaadka
Waxaan fulinaa rukhsadaha lagama maarmaanka ah.
chown -R www-data:www-data files log tmp public
Waxaan tijaabinay rakibaadda redmine
Qeybtaan waxaan ku tijaabineynaa miinada:
Hada waan shaqeynayaa Hadda waxa ka maqnaan lahaa waa in la habeeyo Server-ka SMTP iyo u beddel server-ka Webrick Apache2. Isbedelka ayaa la sameeyay, maaddaama server-ka Webrick ee wax soo saarka uu cuno ilo badan.
gem install passenger -V
Waxaan wax ka bedelnaa: /etc/apache2/httpd.conf oo waxaan ku darnaa khadadka soo socda:
RailsEnv production RailsBaseURI /redmine
Waxaan ku darnaa VirtualHost gudaha / iwm / apache2 / goobaha-karti / faylka
Waxaan galnaa www.redmine.dominio.com iyo DONE! Ku raaxayso mirahaaga cas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku rakibidda Redmine 2.4.0 Debian 7
Chakra Linux Descartes ayaa la heli karaa si loo soo dejiyo
Xaraashka: Codsiga lagu qaadayo shaashadaha ama shaashadda illaa barta laga soo galo